December 2014 - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လူသန်းပေါင်း တစ်ထောင်မှာ သွေးတိုးရောဂါ ခံစားနေကြ ရပြီး နှစ်စဉ် ၇ဒသမ၁ သန်း သေဆုံး စေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း သွေးတိုးရောဂါ ခံစားနေရသူ ဦးရေဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပို၍မြင့်တက်လာ နေကြောင်း အရှေ့တောင်အာရှ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ စစ်တမ်းများမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လည်းကျွမ်းကျင်ဆေးပညာရှင် များ ကသွေးတိုးရောဂါကိုတိတ်တဆိတ် လူသတ်သမား(Silent Killer)လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါဟာအချိန်အခါမရွေး၊ရာသီဥတုမရွေးဖြစ်တတ်တဲ့
ရောဂါအမျိုးအစားဖြစ်ကာအပူအကြောင်းခံ၍သွေးတိုးခြင်း၊အအေးအကြောင်းခံ၍သွေးတိုးခြင်းနဲ့ အပူအအေးနှစ်ပါးပြိုင်၍ သွေးတိုးခြင်းဆိုပြီးသွေးတိုးသွေးတက်ရောဂါသုံးမျိုးရှိပါတယ်။ သွေးပေါင် တိုင်းမည်ဆိုပါက (၁) မတိုင်းမီနာရီဝက်အတွင်း အစာစားခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက် ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းမလုပ် ပါနှင့်၊ (၂) ဝမ်းနည်း ဝမ်းသာစိတ်လှုပ်ရှားချိန်တွင်မတိုင်းပါနှင့်၊ (၃) မတိုင်းမီ၁ဝမိနစ်ခန့်ကိုယ်ရောစိတ် ပါ ဖြေလျှော့အနားယူပါ၊ (၄) လက်မောင်း ပတ်လေအိတ်နှင့်နှလုံးကိုရေပြင်ညီတစ်တန်းတည်းရှိနေပါစေ၊(၅)တိုင်းနေစဉ်ငြိမ်ငြိမ်နေပါ၊ စကားမပြောပါနှင့်၊မလှုပ်ပါနှင့်။ သွေးတိုးရောဂါအဆင့် သွေးဖိအားကို မီလီမီတာ မာကျူရီယူနစ်ဖြင့်တိုင်းတာပြီး နှလုံးကြွက်သား ညှစ်ထုတ်စဉ် သွေးကြောအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဖိအားကို အပေါ်သွေးဟုခေါ်ပြီး နှလုံးကြွက်သား မူလအတိုင်း ပြန် ဆန့်စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖိအားကို အောက်သွေးဟု ခေါ်ပါတယ်။ အသက်(၁၈)နှစ်နှင့်အထက်လူကြီး များအားလုံး၏ သွေးဖိအားအခြေ အနေကို(က)ပုံမှန်သွေးဖိအား၊ (ခ) ပုံမှန်ထက်မြင့်မားပြီးသွေးတိုးမဟုတ် သည့်အခြေအနေ၊(ဂ)အဆင့် (၁)သွေးတိုးရောဂါ၊(ဃ)အဆင့် (၂)သွေးတိုးရောဂါဟူ၍ အပိုင်း (၄) ပိုင်းခွဲခြားသတ်မှတ်လေ့ရှိပါ တယ်။ (က) အပေါ်သွေး ၁၂ဝ အောက်နှင့်အောက်သွေး၈ဝအောက် က ပုံမှန်သွေးဖိအားဖြစ်ပါတယ်။ (ခ)အပေါ်သွေး ၁၂ဝမှ၁၃၉ကြား နှင့်အောက်သွေး ၈ဝမှ ၈၉ကြား က ပုံမှန်ထက်မြင့်မားပြီး သွေးတိုး မဟုတ်သေးတဲ့အခြေအနေလို့ယူ ဆလေ့ရှိပါတယ်။(ဂ)အပေါ်သွေး ၁၄ဝမှ၁၅၉ကြားနှင့် အောက်သွေး ၉ဝမှ၉၉ကြားကိုတော့ သွေးတိုး ရောဂါအဆင့်(၁) အဖြစ်သတ်မှတ် ပါတယ်။(ဃ)အပေါ်သွေး ၁၆ဝ နှင့်အထက်၊ အောက်သွေး ၁ဝဝနှင့် အထက်ကသွေးတိုးရောဂါအဆင့် (၂)ဖြစ်ကာ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါလက္ခဏာများ သွေးတိုးရောဂါရှိသူတွေရဲ့ပျမ်း မျှသုံးပုံတစ်ပုံခန့်မှာ မည်သည့် လက္ခဏာများထွေထွေထူးထူးမပြ တာကြောင့် မိမိကိုယ်မိမိ သွေးတိုးနေမှန်းတောင်မသိကြပါဘူး။ လူအများစုမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါအစလက္ခဏာများခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇက်ကြောတက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ အသက်ရှူမြန်လာခြင်း၊ အမြင်ဝေ ဝါးလာခြင်း၊ နားအူခြင်း၊ မျက်နှာ ရောင်အမ်းခြင်း၊ နှာခေါင်းသွေးလျှံ ခြင်း၊ မျက်ခွံမို့အစ်ခြင်း၊ လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးများဓမ္မတာရာသီလာနေ စဉ်မှာလည်းသွေးဖိအားတိုးတတ်ပါတယ်။ (သွေးတိုးရောဂါရဲ့ သဘောသဘာဝဟာ ရောဂါစဖြစ်ပြီဆိုတာနှင့်ဆက်တိုက် သွေးတိုးသွားဖို့သာရှိပါတယ်။
ပြန်ကောင်းသွားစရာအကြောင်းမရှိပါ။ရောဂါ လက္ခဏာပေါ်သည်နှင့်မပေါ်သည် သာဖြစ် ပါတယ်။သွေးတိုးကျ ဆေးအမျိုးအစားဟာအခြားသော ပဋိဇီဝအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ ကဲ့သို့သောက်သုံးသူ ကို ဆေးယဉ်သွားခြင်း(ဆေးမတိုးခြင်း)မျိုးလုံးဝမဖြစ်စေပါဘူး။ဒါကြောင့် မိမိသဘောဖြင့်လက္ခဏာပေါ်လျှင်ဆေးသောက်မည်၊ မပေါ်လျှင်ဆေး မသောက်ဘဲနေတာမျိုးမပြုသင့်ပါ ဘူး။ မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာ မျှမပြဘဲနှင့်လည်းသွေးတိုးရောဂါ ဆိုးဆိုးရွားရွား ရှိနေနိုင်တာကို သတိပြုပါ)
ဒါတွေကြောင့်လည်းသွေးတိုးနိုင် သွေးတိုးရောဂါရှိသူတွေရဲ့ ၉ဝ-၉၅ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာအကြောင်း ရင်းတိတိကျကျမသိရဘဲသွေးတိုး နေကြပြီး ကျန်၅-၁ဝရာခိုင်နှုန်း ခန့်ကခန္ဓာကိုယ်တွင်းရောဂါတစ်မျိုး မျိုးစွဲကပ်နေခြင်းကြောင့်သွေးတိုး ရောဂါခံစားရလာပါတယ်။အထူး သဖြင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါအမျိုး မျိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအထွက်လွန် ကဲသောရောဂါ၊ Cocaineç Cy-closporinç Erythropoietinç Adrenergic စတဲ့ ပဋိဇီဝဆေးမှီဝဲ သောက်သုံးရခြင်း၏ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သွေးတိုးရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် သွေးတိုးခြင်း၊အရက်အလွန်အကျွံ သောက်သုံးခြင်းနှင့် ပူပြင်းသော နေရောင်ခြည်အောက် အချိန်ကြာ မြင့်စွာသွားလာရခြင်းစသည့် အကြောင်းများကြောင့်လည်း သွေးတိုးရောဂါဖြစ်လာရပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ (၁)သွေးတိုးရောဂါကြောင့် နှလုံးသွေးကြောများမာကျောကျစ် လျစ်လာပြီးနှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ခြင်း(သို့မဟုတ်) ပိတ်ဆို့ခြင်း၊နှလုံး ကြွက်သားများထူထဲလာခြင်း၊နှလုံး ညှစ်အားလျော့နည်းလာခြင်း စသည့်နှလုံးရောဂါအမျိုးမျိုး ဖြစ် လာနိုင်ပါတယ်။ (၂)သွေးတိုး ကြောင့်ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ် ခြင်း၊ သွေးကြောပေါက်ခြင်းဖြစ် လာကာ ထိုမှတစ်ဆင့် လေဖြတ် လေငန်းရောဂါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ (၃) သွေးတိုးရောဂါ နာတာရှည် လာပါကကျောက်ကပ်ပျက်စီးသွား ပြီး ဆီးထဲသွေးပါခြင်း၊ ဆီးဆိပ်တက်ခြင်းများဖြစ်လာပါတယ်။ (၄)သွေးတိုးရောဂါပြင်းထန်မှုကြောင့် မျက်စိတွင်းရှိ မျက်ကြည်လွှာနှင့် သွေးကြောများ ထိခိုက်ပျက်စီးပြီး အမြင်အာရုံထိခိုက်ယိုယွင်းသွား နိုင်ပါတယ်။ (၅) သွေးတိုးရောဂါ ရှိသူများက သွေးဖိအားကို 140/90 mmHg ထက်မကျော်လွန် အောင်ထိန်းထားသင့်ပြီးဆီးချိုနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိ သူများအနေ ဖြင့်သွေးဖိအားကို 130/80 mmHg အောက်ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝနေထိုင်နည်းပုံစံ ကိုယ်အလေးချိန် အဝမလွန်စေရန် ထိန်းသိမ်းထားရမှာဖြစ်လို့ Body Mass Index(BMI) ကို ၁၈ဒသမ၅ မှ ၂၄ဒသမ၅ အတွင်း ရှိနေပါစေ။လမ်းမြန်မြန်လျှောက်ခြင်း၊စက်ဘီးစီးခြင်း၊ရေကူးခြင်းစတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်နေ့မိနစ်၃ဝပုံမှန်လုပ်ပေး ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ သောကများခြင်း၊ဒေါသအမျက်ထွက်ခြင်း တို့က သွေးတိုးစေနိုင်တာ ကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်အေးချမ်းသာစွာနေထိုင်ပါ။တရားမှတ်ပါ။ယောဂကျင့်ပါ။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွေး၊ ကြောင်လေးများဖြင့်အချိန်ပေး၍ နေပါ။ အိပ်ရေးမဝခြင်းကလည်း သွေးတိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အစားအစာများ သစ်သီးဝလံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အဆီထုတ်ထားတဲ့ နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများကိုများများစားပါ။ဆား(ဆိုဒီယမ်)ပမာဏ ပါဝင်မှုနည်းတဲ့အစားအစာများကို ရွေးချယ်ပါ။ အရသာကောင်းစေ ရန် ပြုပြင်ထားသောအစားအစာ များနှင့်အသင့် စားအစားအစာအထုပ် တွေမှာလည်း ဆားပါဝင်မှုများ လို့သတိပြုပါ။ ငါးများများစား ပါ။ အဆီပါဝင်မှုများတဲ့အနီရောင် အသားများနှင့် ကြက်၊ ဘဲ အရေခွံ များကိုရှောင်ပါ။ကိုလက်စထရော များတဲ့အဆီအဆိမ့်၊ အချိုများကို ရှောင်ပါ။ အရက်အလွန်အကျွံ သောက်သုံးခြင်းက သွေးတိုးစေ တတ်သဖြင့် အထူးရှောင်ကြဉ်ပါ။
သွေးတိုးရောဂါပျောက်မြန်မာ့ဆေး နည်းတိုများ (၁) ဒန့်သလွန်ရွက်ကို ရေစင် အောင်ဆေးပြီးထောင်းကာအရည် ညှစ်ယူပြီးလက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှစ်ဇွန်း ခန့်သောက် ပေးခြင်းဖြင့် ချက်ချင်း သက်သာသွားစေပါတယ်။ ဒန့်သလွန်ရွက်ဟင်းခါးရည်သောက်နိုင်ပါတယ်။ (၂)သံပရာသီး အစေ့ငါးစေ့ ခန့်ဝါးစားလိုက်တဲ့အခါသွေးတိုး ချက်ချင်းသက်သာသွားပါလိမ့် မယ်။သံပရာပင်၏အခေါက်ကို ဆေးကြောပြီး ရေနှင့်သွေး၍သောက် နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သံပရာသီး တစ်လုံးကိုအလယ်မှထက်ခြမ်း လှီးကာ ရေနွေးအပူချိန် ၇၅ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်ထဲသို့ ၄၅မိနစ်ခန့် ထည့်ပြီးယင်းပြုတ်ရည်ကိုသောက် သုံးပါက တစ်ခဏအတွင်းသွေး တိုးကျစေပါတယ်။(၃) မြင်းခွာ ရွက်ကိုအရည်ညှစ်သောက်ခြင်း၊ သုပ်စားခြင်း၊ဟင်းခါးချက်သောက် ခြင်းဖြင့်သွေးတိုးကျစေပါတယ်။ (၄) ဧကရာဇ်ပင်၏အရွက်နှင့် အမြစ်တို့ကို အရည်ညှစ်၍ တစ်နေ့ သုံးကြိမ်သောက်ပေးပါ။ (၅) ဗာဒံ ရွက်အနုသုံး လေးရွက်ခန့် ကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ငါးမိနစ်ခန့် ပြုတ်၍သောက်ပေးပါ။တစ်နေ့ ကို လက်ဖက်ရည်ခွက်သုံးခွက်ခန့် သောက်ပေး ခြင်းဖြင့်ရက်သတ္တပတ် အတွင်းမှာပင်သွေးတိုးရောဂါ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။အထူး သတိပြုရန်မှာ ဗာဒံရွက်ပြုတ်ရည် ကို အလွန်အကျွံသောက်ပါက ဝမ်းချုပ်တတ်ပါတယ်။(၆) ကြက် သွန်ဖြူဥတစ်လုံးအမျိုးအစားကို ထမင်းစားတဲ့အခါတိုင်း သုံးလုံး မှ ငါးလုံးအထိစားပေးပါက သွေးပေါင်တက်ခြင်းကိုကျစေသလိုသွေး ပေါင်ကျနေသူကိုလည်း
၁။ ကျွန်မအသက် ၃၃ ပြည့်ခါနီးပါပြီဆရာ။ အပျိုပါဆရာ။ ကန်တော့ပါဆရာ မိန်းမအဂါင်္တဝိုက် ယားယံမှုဖြစ်လို့ ညည အိပ်မရဘူးဆရာ။ အပြင်ဘေးပတ်ပတ်လည်က ယားတယ်ဆရာ။ အဖြူအဆက်မပြတ်ဆင်းတတ်လို့ အမြဲ daily pad သုံးပြီး Lactacyd (gentle cleaning wash) သုံးတယ်ဆရာ။ အမြဲအနံ့အသက်ကအစ သန့်ရှင်းမှုဂရုစိုက်တာတောင် ယားယံမှုက မခံမရပ်နိုင်ဘူးဆရာ။ ကျွန်မအခု့့ မှာပါဆရာ။ အပူစာအစပ်စာ ရှောင်ပါတယ်ဆရာ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်း မသိဘူးဆရာရယ်။ အလုပ်တဖက်နဲ့မို့ ညအိပ်ရေးပျက်တာ တော်တော် ဆိုးဝါးတယ်။ အခုရက်ပိုင်း ပိုဆိုးဝါးလို့ရေနွေးကို ဆားရှာလကာရည်ထည့်ပြီး အပေါ့သွားတိုင်း ဆေးပါတယ်ဆရာ။ လိမ်းဆေး Dermovate cream ကိုတနေ့ ၂ ကြိ်မ် ယားယံတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင် လ်ိမ်းပေမဲ့ လိမ်းတုန်းသက်သာပြီး ပြန်ဖြစ်တယ်ဆရာ။ ကျွန်မနာမည့့် ပါဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါဆရာ။ မိန်းမအဂါင်္ပါ တခါတလေယားယံတာရော ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါသလားဆရာ။ အလုပ်လုပ်ရတာ ဒီလိုဖြစ်နေတော့ စိတ်နဲ့လူမကပ်ဘူးဆရာရယ်။
၃။ ဆရာရှင့် ကန်တော့နော့့် မိန်းမကိုယ်ကမခံနိုင်အောင်ယားနေလို့။ တချိန်လုံးရေဆေးနေရတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင် သက်သာမယ့်ဆေးသောက်ဘို့လိုပါသလား။ ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်လို့ရပါသလဲ။ ကလေးကိုထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်လို့ပါ။
Vaginal itchess ကိုဘာသာပြန်ရင် (ဗဂျိုင်းနား) ယားခြင်းဖြစ်တယ်။ မြန်မာလိုဆိုရင် မွေးလမ်းကြောင်းယားတာပါ။ တကယ်တော့ မိန်းမကိုယ်ဆိုတာကို Vulva ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမကိုယ်ယားယံတဲ့ရောဂါကို Pruritus vulvae လို့ ခေါ်တယ်။ အဖြစ်မနည်းပါ။ အပျိုတွေမှာလဲ ဖြစ်တယ်။ တချို့မှာခဏဖြစ်ပြီး တချို့မှာတာရှည်ဖြစ်တယ်။
အောက်ခံရောဂါ တခုခုရှိနေလို့ဖြစ်တာများတယ်။ ရောဂါရယ်လို့မဟုတ်ဘဲ အစိုဓါတ်ကနေလဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Moisture အစိုဓါတ်ဆိုတာ ဆီးစိုနေတာ၊ ဝမ်းသွားတာနဲနဲပေကျန်တာ၊ ချွေးထွက်များတာ၊ အစားအသောက်ထဲမှာကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေတာ၊ ဥပမာ ကေဖင်း၊ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ မြေပဲပါနေတာတွေကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
• ဆပ်ပြာ၊ ရေမွှေး၊ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေး၊ (ကွန်ဒွမ်)၊ အဝတ်အထည်ဆိုးဆေး၊ ဆပ်ပြာမှုံ့၊ အဝတ်အထည် (ကွန်ဒီရှင်နာ)၊ စတဲ့ သန့်ရှင်းရေးနဲ့ အလှအပအမွှေးအကြိုင်တွေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ မတည့်သူတွေမှာလဲယားနိုင်တယ်။
- Antihistamine = Benzodiazepines (အင်တီ-ဟစ်တမင်း) ဆေးညအချိန်သောက်နိုင်တယ်။
• ရေနဲ့ နေ့တိုင်းမိန်းမကိုယ်ကို အသာအယာဆေးကြောပါ။ Feminine hygiene sprays and douches ကရိယာတွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေ မသုံးဘဲသာဆေးပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာမှာ (ထိုင်နေတဲ့ အနေအထားမှာ) လက်ကိုရှေ့ကနေ နောက်ဖက်ဆီသာ တလမ်းသွားလှုတ်ရှားပါ။ ရေကိုအပေါ်ကနေလောင်းချနည်းက စည်ပိုင်းထဲစိမ်ချိုးတာထက် ကောင်းတယ်။ ရေမခြောက်သေးခင် အတွင်းခံမဝတ်ပါနဲ့။
• လိင်ဆက်ဆံတာမှာ အထူးသတိထားပါ။ ပဋိဇီဝဆေးကိုလိုမှသာသုံးပါ။ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တာတွေအတွက် ဆေးသပ်သပ်လိုပါမယ်။ (ကွန်ဒွမ်) မှာ သုက်ပိုးသတ်ဆေးလဲတွဲထားတာဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ သင့်-မသင့် ကြည့်ပါ။ ဆီးစပ်မွှေး မရိတ်ပါနဲ့။
- Vaginal Discharge မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/…/vaginal-itching.htm
- Vaginal itching မိန်းမကိုယ်ယားခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/…/vulvovaginitis.html
- Vulvovaginitis အမျိုးသမီးအင်္ဂါရောင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/20…/…/vaginal-itching.html
အမှတ်တမဲ့တော့ ရေတွေတအားသောက်တယ်ဆိုတာရှားပါတယ်။ Water drinking contests ရေသောက် ပြိုင်ကြရင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ၁၂-၁-၂ဝဝ၇ တုံးက Hold Your Wee foraWii ရေသောက်ပြီး သေးမပေါက်နဲ့ဆိုတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်သူ ၂၈ နှစ်အရွယ်၊ ကလေး ၂ ယောက်အမေ Jennifer Strange ဟာ သေသွားလို့ ပြိုင်ပွဲစီစဉ်တဲ့ The End ရေဒီယိုက ဒေါ်လာ ၁၆့၅ သန်း လျှော်လိုက်ရတယ်။
• Overexertion ခွန်အား အသုံးများတာကနေလဲဖြစ်စေနိုင်တယ်။ မောလွန်းလို့ ရေတွေ တအားသောက်ရင် ဖြစ်မယ်။ ၁၂-၉-၁၉၉၉ မှာ စစ်သင်တန်းဆရာ Michael J. Schindler သေဆုံးရတယ်။
ဓါတ်ပုံ = ၂ဝဝ၈ မေလ (၁၅) ရက်နေ့က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ (ထန်ဝှာ) ခရိုင်မှာ အမျိုးသမီးတယောက် ရေအဆိပ်သင့်လို့ ဆေးရုံမတင်ရမီပုံ။
ရာသီအေးလာ ဆောင်းအခါ သတိထားစရာ
အေးလာသည့် ရာသီဥတုမျိုးတွင် မိမိကျန်းမာရေးအတွက် ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ရန် မိမိ ခန္ဓာကိုယ့်အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်ပါသည် ။ အဓိကသည်လို့ ဥတုမျိုးတွင် သွေးတိုးရောဂါ အခံရှိသူများ အထူးသတိထားနေထိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည် ။ တစ်ချို့ ငယ်ရွယ်သူများအနေဖြင့် မိမိတွင် သွေးတိုးနေသည့် အနေအထားလည်း မသိ မရှိဘူးထင်ပြီး ခေါင်းလျှော်ခြင်း ၊ ရေချိုးခြင်းကို အလေးအနက်မထားဘဲ ပေါ့ပေါ့လေးတွေးပြီး လုပ်ဆောင်ကျလို့လေဖြတ်ခြင်း ၊ လေဖြန်းခြင်း အဖြစ် ပါးတွေရွဲခြင်း မျက်ခွံတစ်ဖက် ပိတ်မရခြင်း အဖြစ်ကို ရောက်ရှိတက်ပါသည် ။
ကျန်းမာရေးကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်း အဖြစ် ရာသီဥတုအေးချမ်းသော နံနက်ခင်းစောစောထပြီး လမ်းလျှောက်ခြင်း ၊ ပြေးခြင်း လုပ်ဆောင်သည့် အခါတွင် အအေးမပတ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ဝတ်ဆင်ပြီးမှသာ ကိုယ့်လက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သင့်ပါသည် ။
အအေးပတ်ခြင်းကြောင့် သွေးတိုးခြင်း ၊ ချောင်းဆိုးခြင်း ၊ နားစည်ရောင်ခြင်း ၊ မူးတက်ခြင်း ၊ အစာမကြေ အော့အန်တက်ခြင်း နှင့် ခြေလက်ကိုက်ခဲနေခြင်း များဖြစ်တက်ပါသည် ။အဓိက ကျန်းမာရေးအလျင်အမြန် ဆိုးရွားသွားစေနိုင်သည့်ကတော့ သွေးတိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ သွေးတိုးနုန်း မြင့်မားလာတာကို မသိရှိလိုက်ပါက မိမိ အသက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ် ။ လူကြီး လူငယ်များအပါ အထူးသတိချပ်စေချင်ပါတယ် ။
ရာသီဥတုနှင့်လိုက်ဖက်သည့် ဝတ်စားမှု့ ကို ဝတ်ဆင်ပြီး နေထိုင်သည့်ပါသည် ။ ရေသောက်မနည်းဖို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ် အေးနေသည့် ဥတုကြောင့် ရေသောက်နည်းတက်ကြပါတယ် အေးနေပေမဲ့ တစ်နေ့ ရေကို အနည်းဆုံး နှစ်လီတာလောက် သောက်သုံးပေးသင့်ပါသည် ။
၁။ ဆရာရှင့် ကျွန်မက ပါးစောင်လေးဖက်လုံးမှာ မှိုတွေလိုဖြူဖြူတွေ (အနီရောင်ရော) ဖြစ်နေတာ တစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ အပူအစပ်စားရင် အပူနာလိုမျိုး ဖြစ်သွားပါတယ်။ အခု Fame ကထုတ်တဲ့ Tomatac နဲ့ Completet သောက်နေပါတယ်။ လိမ်းဆေးကတော့ miconarzole cream လိမ်းရပါတယ်။ ကြာရင် ကင်ဆာဖြစ်သွားမယ်ပြောပါတယ်။ ကျွန်မက သူများ ပြောတာတွေနဲ့ စာအုပ်မှာဖတ်ရလို့ မင်းဂွတ်သီးကို အစေ့အခွံအားလုံးကြိတ်ပြီးတော့ လုံးလုံးလေးလုပ်ပြီး အေးခဲခန်းမှာ သိမ်းထားပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုလည်းသောက်ပါတယ်။ ကင်ဆာပျောက်တယ်ဆိုလို့ပါ။ သောက်လို့ရပါသလား။ ကျွန်မအနာဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ပြီး ပျောက်ကင်းဖို့ ကြာဦးမှာလားသိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ဆေးသောက်နေတာ လေးလ ရှိပါပြီ။
၂။ ကျွန်မအမျိုးသားကအသက် ၃၃ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူ့ရဲ့အောက်နှုတ်ခမ်းအတွင်းဖက်မှာအဖုလေးတဖုပေါက်လာတာ ၂ လလောက်ရှိပါပြီ။ အဲဒိအဖုက အအေးသောက်ရင် မသိသာပေမဲ့အပူနဲ့ထိမိရင် စတော်ပဲစေ့လောက် ကြီးလာပါတယ်။ အရည်အိတ်လိုပုံစံမျိုးပါပဲ။ တခါလဲအရည်ပေါက်ထွက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အကျိတ်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးခန်းတော့ မပြဖြစ်သေးပါဘူးဆရာ။ အသိဆရာဝန်တယောက်ကိုမေးကြည့်တော့ ကင်ဆာလက္ခဏာနဲ့ တူတယ်ဆိုလို့ ကျွန်မတ်ို့ နှစ်ယောက်လုံးစိုးရိမ်မိပါတယ်ဆရာ။ နာတာကျင်တာတော့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ဆေးစစ်ဖို့က နောက်လလောက်မှ လုပ်ဖြစ်မှာမို့ လောလောဆယ် ဆရာ့ဆီကိုစာရေးအကူအညီတောင်းရတာပါ။ ဘာရောဂါဖြစ်နိုင်လဲသိချင်ပါတယ်ရှင်။
ပါးစပ်-ခံတွင်းထဲမှာအများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါအခြေအနေ (၁၂) ခုကိုရွေးရေးပါမယ်။ တခြားဟာတွေလဲရှိသေးတယ်။
4. Irritation fibroma ခဏခဏထိမိရာကနေအတွင်းထဲမှာအသားမာလိုဖြစ်ခြင်း
5. Fordyce's granules ချွေးထွက် (ဂလင်း) တွေကပါးစပ်ထဲရောက်နေခြင်း
9. Epulisfissurata (အိပြူလစ်)
10. Varicosities သွေးပြန်ကြောဖေါင်းနေခြင်း
ဖြူနေတဲ့အကွက်ကို ပိတ်ကျဲစနဲ့ပွတ်ပေးလဲပျောက်မသွားဘူး။ ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ အနာမျိုးနဲ့လဲမဆိုင်ဘူး။ ဆေးလိပ်သောက်သူ၊ အရက်သောက်သူ၊ ခံတွင်းပိုးဝင်ခံရသူ၊ နေရာတခုမှာကွက်ပြီးကိုယ်နဲ့ မသင့်တာနဲ့ တွေ့ထားသူ၊ (ဆစ်ဖလစ်)၊ ဗီတာမင် (အေ) နည်းခြင်း၊ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်သင့်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတွေကနေ ဖြစ်စေတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေမှာ (၄ဝ ကျော်) အဖြစ်များတယ်။ ယောက်ျားတွေက မိန်းမတွေထက် ပိုဖြစ်တယ်။ လျှာ၊ ပါးစောင်၊ အထက်-အောက် ပါးစောင်အချိုင့်နေရာတွေမှာ လူတဝက်လောက် ဖြစ်တယ်။ ကျန်တဲ့နေရာတွေကအာခေါင်၊ အောက်နုပ်ခမ်း၊ လျှာအောက်နေရာတွေမှာ ဖြစ်တယ်။ ဖြူပြီး၊ နဲနဲကြည်နေမယ်၊ ထူမယ်၊ စဉ်းကြောင်းတွေရှိနိုင်တယ်၊ အသီးလိုလဲဖြစ်နိုင်တယ်၊ မာတင်းနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မျက်နှာပြင် ချောတာ၊ ကြမ်းတာဖြစ်နိုင်တယ်။ အဖြူ၊ ဝါစိမ်းစိမ်း၊ ဆေးလိပ်သောက်သူဆိုရင် ညိုတိုတိုဖြစ်နိုင်တယ်။
မှိုကြောင့်ဖြစ်တာ၊ (အက်စ်ပရင်) သောက်လို့ဖြစ်တာတွေကအဲလိုလုပ်ပေးရင် ရှင်းသွားနိုင်တယ်။ မသေခြာရင် အသားစ ဖြတ်ယူစစ်ဆေးရမယ်။ ၄-၆% မှာကင်ဆာဖြစ်တတယ်။ Erythroplakiaနီနေတာမျိုးကဆိုးတယ်။ ကိုက်မိ-ထိခိုက်မိတာ၊ သွားအတွက် အပိုပစ္စည်းထည့်တာကအဆင်မပြေတာ၊ သွားအဆင်မပြေပေါက်နေတာတွေကိုစစ်ရ-ပြင်ရမယ်။
Palatal or Mandibular Torus အရိုးဘုများ
ချွေးထွက် (ဂလင်း) တွေကပါးစပ်ထဲနေရာလွဲရောက်နေတာဖြစ်တယ်။ အစုလိုက်များတယ်။ တခုနဲ့တခုရောထွေးနေတာလဲ ဖြစ်တယ်။ အံဆုံးတွေဘေးမှာဖြစ်တယ်။ ဘယ်-ညာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အောက်နုပ်ခမ်း၊ လျှာ၊ သွားဖုံး၊ အာခေါင်တွေမှာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အသက် ၂ဝ-၃ဝ မှာအဖြစ်များတယ်။ Candida albicansမှိုကြောင့်ဖြစ်တာကဂွမ်းစနဲ့ ရှင်းပေးတာပျောက်မယ်။ ဒါတွေကတော့ မပျောက်ဘူး။ ဆေးကုသဘို့လဲမလိုပါ။
(၃) Herpetiform ulcers အမျိုးအစားကတော့ ၁-၂ ပါတ်ကြာရင် ပျောက်တယ်။ အရည်ကြည်အဖုလေးကနေစဖြစ်ပြီးမှ အနာဖြစ်လာတယ်။ Crohn's disease, Neutropenia and Sprueရောဂါတွေကိုလဲစစ်ဆေးသင့်တယ်။ ပျောက်ဆေးဆိုတာ မရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ သက်သာအောင် Topical steroids (0. 5% Hydrocortisone) (စတီရွိုက်) ဆေး လိမ်းပေးနိုင်တယ်။ သိပ်ဆိုးသူတွေကို (စတီရွိုက်) ဆေးပါးစပ်ကနေသောက်ခိုင်းတယ်။ Tetracycline mouth wash (Achromycin V Oral Suspension) ဆေးနဲ့ ပါးစပ်ကိုဆေးတာလဲအကျိုးရှိတယ်။ Chlorhexidinegluconate oral rinse (Peridex) ဆေးသုံးတာလဲသက်သာတယ်။
Moniliasis လို့လဲခေါ်တယ်။ ရေးခဲ့တဲ့ (၁ဝ) မျိုးကလူကြီးတွေမှာဖြစ်ပြီး မှက္ခရုနာက ကလေးမှာသာဖြစ်တယ်။ ကလေးမှာတောင် နို့တိုက်အရွယ် ကလေးငယ်တွေ။ လျှာ၊ အာခေါင်၊ ပါးစောင်တွေမယ် အဖြူဖတ်တွေ ဖြစ်ပြီး၊ ဘေးက နီနေတယ်။ နာတယ်၊ နို့စို့ရ၊ အစာစားရခက်တယ်။ ကလေးရဲ့ လျှာကို အဝတ်သန့်သန့်လေးကို လက်ညှိုးမှာပါတ်ပြီး အဖြူဖတ်တွေ ရှင်းပေးပါ။ မိခင်နို့ကိုအမြဲသန့်နေပါစေ။ လိုအပ်ရင် Nystatin Oral Suspension 4-6 mL တနေ့ ၄ ကြိမ် တိုက်ပါ။
ကျီးကန်းပါးစပ်နာကို Angular stomatitis (Cheilosis or Angular cheilitis) လို့ ခေါ်တယ်။ ပါးစပ်-ဒေါင့်စွန်း နှစ်ဖက်လုံးမှာ ဖြစ်တာများတယ်။ ကွဲကြောင်းလေးတွေ ဖျာထွက်လာမယ်။ သွေးထွက်တတ်တယ်။ အနာအထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အနာကနေမှိုပိုးဝင်လာရင် Candida albicans (Thrush) ဖြစ်မယ်။ ဗက်တီးရီးယားလဲဝင်နိုင်တယ်။
• Vitamin B 2, Riboflavin ဗီတာမင် ဘီ (၂)၊ ဆေးသောက်ပါ။ ကြွယ်ဝစာစားပါ။ နို့နှင့် နို့ထွက်အစာများ၊ ဥ၊ အသဲ၊ အသီးအရွက်၊ ဆန်၊ ဂျုံ၊ ရိစ်။ Vitamin C ရအောင် စိမ်းတဲ့ အသီးအရွက်-အသီးအနှံတွေလဲစားပါ။
• မှိုကြောင့်ဖြစ်ရင် Antifungal creams မှိုအတွက်လိမ်းဆေးNystatin, Imidazoles, Bifonazole, Clotrimazole, Econazole, Ketoconazole, Nizoral®, Miconazole, Tioconazoleတခုခုသုံးနိုင်တယ်။ Antifungal drug မှိုအတွက်စားဆေးImidazoles, Allylamines
• Clotrimazole and Betamethasone, Nystatin and Triamcinolone Acetonideစတီရွိုက်နဲ့ ရောထားတဲ့ဆေး သုံးနိုင်တယ်။ 1% Hydrocortisone လဲလိမ်းနိုင်တယ်။ ရေယုံဆိုရင် မသုံးပါနဲ့။
1. Herpes Simplex ရိုးရိုးရေယုံ http://dts-medicaleducation. blogspot. in/2011/11/herpes-simplex. html
2. Tongue diseases လျှာနာများ http://dts-medicaleducation. blogspot. in/2013/11/tongue-diseases. html
3. Thrush (Oral candidiasis) မှက္ခရုနာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/…/thrush-oral-cand…
4. Fungal infections (2) မှိုအမျိုးမျိုး ဆေးအမျိုးမျိုး (၂) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/10/fungus.html
5. Common Oral Mucosal Lesions ခံတွင်း-ပါးစပ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/…/common-oral-muco…
6. Tongue diseases လျှာနာများ http://doctortintswe.blogspot.com/20…/…/tongue-diseases.html
7. Aphthous ulcer and Fissured tongue လျှာနာ အာနာ http://doctortintswe.blogspot.com/…/aphthous-ulcer-and-fiss…
ကော်ဖီကြိုက်သူများအတွက်သတင်းကောင်းလေးပါ။ ''ကော်ဖီကို ရံဖန်ရံခါမှသောက်သူတွေထက်စာရင်၊ ကော်ဖီကို နေ့စဉ်ပုံမှန်သောက်သူများဟာ ဆီးချိုရောဂါအမှတ်(၂) ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားအလာနည်းပါးနိုင်တယ်''လို့ ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက် AFP သတင်းဌာနမှ ဧပြီ ၂၄ ရက်မှာ သတင်း ထုတ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါအမှတ်(၂)ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အင်ဆူလင်ကိုတုံ့ ပြန်နိုင်အားကျဆင်းလာတဲ့အတွက် အင်ဆူလင် မလိုအပ်ဘဲ အင်ဆူလင်ကို တုံ့ပြန်ပေးနိုင်စွမ်းသော ဆေးဝါးများလိုအပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ ပျမ်းမျှ အသက်(၃၅)အထက်မှာ စဖြစ်လေ့ရှိပြီး သွေးတိုး၊နှလုံးရောဂါတို့နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သက်ကြီးပိုင်းဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဆီးချိုရောဂါ၏ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့်က ထိုဆီးချို ရောဂါအမှတ်(၂)ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို ကော်ဖီနှင့်ဆီးချို ရောဂါ ဆက်စပ်မှုသုတေသနကီုငဘေနအသူသါငေ အသင်းအဖွဲ့မှ စေတနာရှင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ဦးရေ ၁၂ဝဝဝဝကျော်နှင့် လေ့လာ စမ်းစစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ လေးနှစ်ကြာ မျှကော်ဖီစွဲသောက် လာခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ကြသော ထိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို အုပ်စုနှစ်စုခွဲ၍ လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ (က) တစ်နေ့ကို ကော်ဖီပျမ်းမျှတစ်ခွက် (သို့မဟုတ်)တစ်ခွက်ခွဲ သောက်လေ့ရှိသူဟာ ဆီးချိုရောဂါ အမှတ် (၂) ဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါးကြောင်း (ခ) တချို့နေ့တွေမှာ ပုံမှန်သောက်နေ ကျ တစ်ခွက်ထက်ပို၍ နှစ်ခွက် တိတိသောက်တတ် သူများဟာ ဆီးချိုရောဂါအမှတ်(၂)ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားအလာ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းထိနည်းပါးသွားကြောင်း၊ (ဂ)ဘော့ စတွန်နိုင်ငံရှိ The Harvard School of Public Health မှ Shilpa Bhu-pathiraju ဆိုသူက ထိုသုတေသန ကို ဦးဆောင်သူဖြစ် ကြောင်း The European Association for the Study of Diabetes (ခေါ်) ဆီးချို ရောဂါလေ့လာစောင့်ရှောက်ရေး ကျန်းမာရေးဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ယခုလို အကျယ်တဝင့်ဖော်ပြထား ပါတယ်။ ၄င်းရဲ့အဆိုကို The Science Media Centre မှကျွမ်းကျင် သူများကလည်းအတည်ပြုထောက်ခံ ထားကြပြီး ကော်ဖီတစ်ခွက်နေ့စဉ် သောက်သင့်ပြီး တချို့နေ့တွေမှာ နှစ်ခွက်သောက်ခြင်းဖြင့် ဆီးချို ရောဂါဖြစ်မလာအောင် ထိန်းထား နိုင်တယ်လို့ ထပ်လောင်းအကြံပြု ထားပါတယ်။ သို့သော် အထက်ပါသုတေ သနပြုချက်ထဲမှာတော့ လက်ဖက် ရည်နှင့် Decaffeinated Coffee (ခေါ်)ကဖိန်းဓာတ်မပါတဲ့ ကော်ဖီ အမျိုးအစားတွေကို မဆိုလိုပါဘူးတဲ့။ အကယ်၍ လက်ဖက်ရည် နှင့် Decaffeinated Coffee တို့ကို စွဲသောက်တဲ့ အခါမှာတော့ သွေး ထဲမှာ သကြားဓာတ်တွေများလာ ၍ ဆီးချို(အမှတ်-၂)ဖြစ်စေတဲ့ အပြင် အဝလွန်ရောဂါပါ ဖြစ်လာ စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လူတိုင်း သွားကိုက်ဖူးသည်။ သွားကိုက်၊ သွားနာရသည့် အကြောင်းရင်း များစွာ ရှိပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် သွားကိုက် ရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ သွားပိုးစားခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။
အသက်အရွယ် ကြီးသူများတွင် သွားခိုင်ခံ့မှု လျော့နည်းပြီး အစာစားစဉ် မကြာခဏ သွားနာလေ့ ရှိသည်။ သွားပိုးစားခြင်း၊ စားကြွင်း၊ စားကျန်များရှိ ကာဗွန်ဟိုက်ဒြိတ်၊ ကစီဓာတ်ကို အခြေခံပြီး ခံတွင်း အတွင်းရှိ ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားငယ် များနှင့် တံတွေးမှ အစာခြေရည် အင်ဇိုင်းတို့ ပိုမို ပူးပေါင်းပြီး နို့အက်စစ်ဓာတ် အဖြစ် အစာများ အချဉ် ပေါက်ကာ သွားပိုးစား လာသည်။
ယင်း အက်စစ်ဓာတ် သည် သွား၏ အပြင်ဆုံး အလွှာဖြစ်သည့် ကြွေသွားလွှာကို စတင် ပျက်စီးစေသည်။ အမည်းစက်များ အသွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ယင်း ကြွေသွားလွှာ သည် ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း မပျက်စီး လွယ်၍ အမာဆုံးဟု သတ်မှတ်ခံ ရသော်လည်း အက်စစ်ဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့ပါ။
ယင်း အက်စစ်ကြောင့် ဒုတိယလွှာ ဖြစ်သည့် ဆင်စွယ်များ ပျက်စီးသည်။ သွားနှစ်လွှာ ပျက်စီးသော်လည်း သွားကိုက်၊ သွားနာ မခံရသေးပေ။ သို့သော် အပူအအေး ကောင်းစွာ မခံနိုင်ဘဲ ရေခဲရည် သောက်လျှင် ကျဉ်လာသည်။ စားကြွင်း၊ စားကျန် များကြောင့် သွားပိုးပေါက် ကြီးလာကာ ကြွေသွားလွှာ မှတစ်ဆင့် ဆင်စွယ်နှစ်၊ ဆင်စွယ်နှစ် မှ မွသွားလွှာ အတွင်း ဘက်တီးရီးယား များ ဝင်ရောက်ပြီး သွားမြစ်တွင်းရှိ မွသွားလွှာအိမ် ရောင် လာကာ တဖြည်းဖြည်း ဘက်တီးရီးယား က သွားမြစ်တွင်းသို့ ရောက်ပြီး သွားမြစ်ထိပ် ပြည်တည်နာ၊ သွားမြစ် ပြည်တည်နာ၊ မေးရိုးခြင်ဆီ ရောင်နာ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သွားပေါက် ကျယ်လာသဖြင့် သွားကွဲသွားပြီး သွားနာခြင်း၊ လျှာနှင့် ကွဲသောသွား ထိပါက လျှာနာခြင်း များကြောင့် အစားအစာ ကောင်းစွာ မစားနိုင် သဖြင့် အစာမကြေ ရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
သွားဆွေးမြည့်ခြင်း ရောဂါသည် နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အဆစ် အမျက်နာ ရောဂါများအထိ ဒုက္ခပေးသည်။ သွားဆွေးမြည့် ရောဂါသည် သွားတွင် ကပ်နေသည့် သွားပလပ်၊ သွားချေးလွှာ ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယင်း သွားပလပ် ထဲတွင် ဘက်တီးရီးယား တွယ်နေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သွားဆွေးမြည့်ခြင်း ရောဂါ ကာကွယ်ရန် ပလပ်ဖြစ်သည့် သွားတွင် စားကြွင်း၊ စားကျန်များ မရှိစေရန် နေ့၊ ည နှစ်ကြိမ် သွားမှန်မှန် တိုက်သင့်သည်။
သွားပလပ် မရှိလျှင် သွားဆွေးမြည့် ရောဂါ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ သွားပိုး မစားသော သွားများ ကိုလည်း သွားမျက်နှာပြင် များပေါ်တွင် စစ်ဆေးရန် လိုသည်။ သွားဆရာဝန်မှ သွားကြည့်မှန် သို့မဟုတ် သွားစမ်းသပ်သည့် အပ်ဖြင့် အကြည့်ရ ခက်သော နေရာများတွင် သွားပိုးပေါက်များ သိရှိစေရန် ဓာတ်မှန် အသုံးပြု နိုင်သည်။
သွားပိုးစားခြင်း ဖြစ်စတွင် အမည်းစက်၊ အမည်းကြောင်း တွေ့ရမည်။ သွားပိုးပေါက် ပြင်ပတွင် သွားမနာ သော်လည်း သွားကြား ညပ်ခြင်း၊ အပူအအေး သောက်လျှင် သွားကျဉ်ခြင်း ခံစားရသည်။ သွားရောဂါ သက်သာ စေရန် နာနေသော အပေါက်ထဲ လေးညင်းဆီ ကို ဂွမ်းနှင့်ဆွတ်ပြီး ထည့်ပေးရသည်။ မရပါက သွားနုတ်ရမည်။
အအေးမိ၊တုပ်ကွေး၊နှာစေး၊ချောင်းဆိုးခြင်းအတွက် နည်းလမ်း (၁၉)သွယ်
အအေးမိတုပ်ကွေးရောဂါဟာ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာပျံ့နှံ့ကူးစက်မှုအမြန်ဆုံးနဲ့အဖြစ် များဆုံးသောရောဂါတစ်မျိုးပါ။လူတစ်ဦး ဟာ မိုးရာသီ(သို့မဟုတ်)ဆောင်းရာသီ မှာ ပျမ်းမျှအနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အအေးမိ တုပ်ကွေးဖြစ်နေသူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရှူးခံ၍ နှာချေချောင်းဆိုးသင့်သလို အသုံးပြုထားတဲ့တစ်ရှူးကို အမှိုက်ပုံး ထဲကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်သင့်ပါတယ်။ လက် ကိုင်ပဝါနဲ့အုပ်ပြီး နှာချေချောင်းဆိုးတဲ့ အခါ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက အဲဒီလက်ကိုင်ပုဝါ ထဲမှာ ၂နာရီ၊ ၃ နာရီလောက်ကြာမှ သေသွားပါတယ်။ တကယ်လို့ လူအများ ကြားမှာ နှာချေချောင်းဆိုးတဲ့အခါ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေက တစ်ပေ၊နှစ်ပေ လောက်အထိပျံ့နှံ့သွားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကိုယ်ခံအားနည်းသူဆီကို ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ အလွယ်တကူကူးစက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပါက အအေးမိ၊ နှာစေး၊ နှာရည်ကျ၊ နှာခေါင်းပိတ်၊ ချောင်းဆိုး (ချောင်းခြောက်လည်း ဖြစ်နိုင် သလို သလိပ်ပါခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်)၊ လည်ချောင်းနာ၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတာ တွေ ခံစားရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အဖျားဝင်လာပြီး သလိပ်တွေပျစ်လာခြင်း၊ ချွဲသလိပ်တွေ ဝါလာခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအခြေအနေမျိုးရောက်မယ်ဆိုရင် ပိုးသတ်ဆေးသောက်မှ ရောဂါပျောက် နိုင်ပါတယ်။ နှာချေချောင်းဆိုးတဲ့အခါ ပြင်ပနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရသော အလုပ်သမား ဝန်ထမ်းတွေတင်သာမကဘဲ ကျောင်းနေ အရွယ်ကလေးများအားလုံး ကိုယ်ခံ အားမကောင်းပါက ကူးစက်ရာသီအဖျား ပိုးမွှားတွေ အလွယ်တကူကူးစက်လာနိုင် လို့ အလုပ်ပျက်/ကျောင်းပျက်ဖြင့် စိတ် ညစ်စရာပါ။ အအေးမိဖျားနာခြင်းကြောင့် အသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရသော်ငြား၊ အဖျားပျောက်ပြီး ချောင်းတဟွတ်ဟွတ် စွဲကျန်ရစ်ခဲ့ကာ မိသားစုဝင်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများကို လက်ဆင့်ကမ်း မကူးစက်ရလေအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အောက်ပါနည်းလမ်း(၁၉)သွယ်ဖြင့် မျှဝေ လိုက်ရပါတယ်။
(၁) အစိမ်းရောင်၊ အဝါရောင် များများ စားပါ။
အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ စားပေးတာက ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို တိုး တက်မြင့်မားစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းထဲတွင်ပါရှိတဲ့ ဓာတု ဓာတ်ပေါင်းစုက အအေးမိလို့ဖြစ်တဲ့ တုပ် ကွေးနဲ့ကူးစက်ဖျားနာတွေကို ကောင်း စွာတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကို ချင်း(ဂျင်း)တစ်ပြားရိုက် ၍ ရောနှောကြော်စားရန် ကိန်းဘရစ်ခ်ျ တက္ကသိုလ်ရှိအာဟာရဗေဒပညာရှင်များ က အကြံပြုထားကြပါတယ်။ အလားတူ အဝါရောင်သီးနှံများဖြစ်ကြတဲ့ လိမ္မော်သီး နဲပသံပုရာသီးတို့ကို ဖျော်ရည်အဖြစ်သော် လည်းကောင်း၊ လိမ္မော်ခွံ(သို့မဟုတ်) သံပရာခွံတို့ကို ရေနွေးစိမ်၍သော်လည်း ကောင်း သောက်သုံးတာဟာ တုပ်ကွေး ဖျားနာခြင်းကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရာ ရောက်ပါတယ်။
ဗီတာမင်စီက ကိုယ်ခံအားကို မြင့် တက်စေပြီး ဗီတာမင်ဒီက အအေးမိခြင်း ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အအေးမိ တုပ်ကွေးဖျားနာခြင်းအတွက် ဗီတာမင် စီတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ ဗီတာ မင်ဒီအပါအဝင် အခြားဗီတာမင်နဲ့သတ္တု ဓာတ်တို့ပါဝင်တဲ့ အစားအသောက်တွေ မျှမျှတတစားပေးရပါမယ်။ ကျွန်မတို့ နေ့ စဉ်စားသောက်သောအစားအစာတွေထဲ မှာ အဆိုပါဓာတ်တွေတစ်ပြိုင်နက်တည်း လုံလောက်စွာမရနိုင်လို့ ဖြည့်စွက်စာ အဖြစ် အားဆေးမှီဝဲ ပေးဖို့လိုပါတယ်။
တစ်နေ့လျှင် ရှစ်နာရီနဲ့အထက် အိပ်ရေးဝဝအိပ်စက်ခြင်းကသွေးတိုးရောဂါ နဲ့အဝလွန်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးရုံသာမက အအေးမိနှာစေးတာမျိုးကို အသက်ရှူလမ်း ကြောင်းထဲက ကူးဆက်ရောဂါပိုးတွေကို လည်းတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ခုနှစ်နာရီထက်လျော့နည်းပြီး အိပ်စက် သူတွေကို ရှစ်နာရီနှင့်အထက် အိပ်စက် သူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါက အိပ်ချိန်နည်းသူ တွေဟာ အအေးမိကူးစက်ရောဂါဖြစ်နိုင် ခြေအလားအလာသုံးဆနီးပါးပိုကြောင်း အမေရိကန်ဆေးသုတေသီများက အကြံ ပြုထားပါတယ်။
ချမ်းအေးတဲ့ရာသီမှာ ကိုယ်ခံအား နည်းတဲ့ ကလေးတွေနဲ့သက်ကြီးရွယ်အို များတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်လွယ်တာ ကြောင့် အိမ်မှာအအေးမိတုပ်ကွေးဖျားနာ ပျောက်ဆေး အဆင်သင့်ဆောင်ထားပါ။ လိုအပ်ပါက အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှ ကူးစက်ပိုးတွေကို ၂ဝရာခိုင်နှုန်းလောက် ကာကွယ်ပေးတဲ့ Actimel (ခေါ်)ပဋိဇီဝ ဆေးကြိုတင်တိုက်ကျွေးပေးပါ။
နံနက်စာ ပုံမှန်စားသူတွေဟာ၊ နံနက် စာ လုံးဝမစားသူတွေထက် အအေးမိကူး စက်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးကြောင်း Cardiff University ရှိ အမေရိကန် ဆေးတက္ကသိုလ်က အကြံပြုထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့ နံနက်စာထဲမှာ ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုများ၊ သံဓာတ်နဲ့သွပ်ဓာတ်ပါရှိသောအစားအစာ များကိုစားပေးကြဖို့ ဆေးသုတေသီများ က ထပ်လောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။
ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်ချက်များအရ၊အအေးမိဗိုင်းရပ်စ် ပိုးရှိသောသူ ကိုင်တွယ်ထားတဲ့တံခါး လက်ကိုင်ဖုများပေါ်တွင် ကျန်ရှိခဲ့တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားတွေဟာ၂၄နာရီကျော် အထိ အသက်ရှင်နိုင်ကြတယ်ဟု သိရပါ တယ်။ ဒါကြောင့် အများသုံးတံခါးလက် ကိုင်ဖုတွေ၊ အရောင်းစင်တာရှိပစ္စည်းတဲ့ တွန်းလှည်းတွေ၊ တံခါးလက်ရန်းတွေကို တစ်ခါသုံးတစ်ရှူးဖြင့်ကိုင်တွယ်ပါ။ ၄င်း တို့ကိုကိုင်တိုင်တွယ်ပြီးပါက မိမိ၏ မျက်လုံး-နှာခေါင်းတို့ကို မတို့ထိကြဘဲ ဆပ်ပြာသုံး၍ လက်စင်စင်ဆေးကြောပါ။
(၇) လက်ကို ဖွက်(ဝှက်)ထားပါ။
အအေးမိဝေဒနာခံစားရသူရဲ့ လက်၊ ခံတွင်း၊ နှာရည်တို့မှကူးစက်ပြန့်ပွားစေနိုင် တာကြောင့် ရောဂါရှိသူရဲ့ လက်နဲ့အခြား အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမကိုင်တွယ် မထိမိသင့်ပါ။ နှာချေချောင်းဆိုးရာမှာ လည်း ကျန်းမာရေးအသိဖြင့် လက် (သို့ မဟုတ်)လက်ကိုင်ပဝါ(သို့မဟုတ်)တစ်ခါ သုံးတစ်ရှူးအုပ်ပါ။ ကလေးငယ်များကို ဖက်ရမ်းနမ်းရှုပ်ခြင်းမပြုရသင့်ပါ။
ရေနွေးဖြင့် ပလုတ်(အာလုတ်) ကျင်း ခြင်းက လည်ချောင်း/လည်မျိုတို့မှ အချွဲ အကျိများနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို သန့်စင် ပေးတာကြောင့် ချောင်းဆိုးခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ ဂျပန်ရိုးရာကုထုံး များတွင် နံနက်အိပ်ရာထ သွားမတိုက်မီ တစ်ချိန်နေ့လယ်စာနှင့်ညစာစားပြီးချိန် များတွင်တစ်ကြိမ်စီ စုစုပေါင်း တစ်နေ့ သုံးကြိမ်မျှ ရေကြက်သီးနွေးခန့်ဖြင့် အာလုတ်ကျင်းလေ့ရှိပြီး ထိုသို့ပြုကျင့် ခြင်းက အအေးမိနှာစေးချောင်းဆိုးခြင်း ကို ၃၆ရာခိုင်နှုန်းနီးပါ လျှော့ချပေးနိုင် တယ်ဟု ဂျပန်ဆေးသုတေသီများက အတည်ပြုထားပါတယ်။
ငရုတ်သီးအခြောက်မှုန့်ထဲတွင် ပါရှိ သော Capsaicin ဓာတ်ဟာ အင်းဆက် ပိုးမွှားတွေကိုသေစေသည့်ပြင် အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းကိုပွင့်လန်းလာစေပါတယ်။ အလားတူ ကြက်သွန်ဖြူထဲရှိ Allicin ဓာတ်ကလည်း ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကောင်းစေတဲ့ သဘာဝပဋိဇီဝဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့် အအေးမိစေတတ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အအေးမိ တုပ်ကွေးနဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းအတွက် ချင်း ပြုတ်ရည်က အကောင်းဆုံးဆေးတစ်ခွက် လို့ တရုတ်ဆေးသုတေသီများက ဆိုထား ပါတယ်။
အချို့ယမကာလုလင်များကလည်း မိုးအေးအေးကိုအကြောင်းပြ၍ အရက်ကို ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် မှီဝဲကြတယ်။ လိုအပ် သည်ထက်ပိုမိုသောက်သုံးပါက အသည်း ကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြင် ပင်ပန်းအားယုတ် ပြီး အအေးမိကူးစက်ပိုးတို့ကို ခံနိုင်ရည် မရှိတော့ပေ။
ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရေဓာတ်အလုံ အလောက်ရရှိမှသာ စားထားသမျှ အာဟာရများကိုစုပ်ယူနိုင်ပြီး ခွန်အား အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးရုံတင်သာမကဘဲ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ မသန့်စင်သောအညစ် အကြေးများကို ချွေး၊ သွေး၊ သလိပ်၊ ဆီး၊ ဝမ်းအဖြစ် ကူညီစွန့်ထုတ်ပေးပါ တယ်။ ဓာတ်ကြီးလေးပါးညီမျှရင် ကိုယ်ခံအားကောင်းကာ ပြင်ပကူးစက် ရောဂါများလည်း အလွယ်တကူဝင်မလာ နိုင်တော့ပါဘူး။
(၁၂) လက်ဖက်ရည်ကြမ်း(ရေ နွေးကြမ်း)သောက်ပါ
လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက် ခြင်းက တုပ်ကွေးဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်း ရပ်စ်ပိုးတွေကို နှိမ်နင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အအေးမိတုပ်ကွေးဖြစ် တဲ့အခါ ကော်ဖီအစား လက်ဖက် ရည်ကြမ်းပူပူသောက်ပေးပါ။
တစ်နေ့ အနည်းဆုံးနာရီ ဝက်ခန့် လမ်းမှန်မှန်လျှောက်ခြင်း က ဇီဝကမ္မလုပ်ဆောင်ချက်ကို ကောင်းကျိုးပြုပြီး ပြင်ပရောဂါ တွေကိုလည်း တိုက်ထုတ်ပေးနိုင် ပါတယ်။
အရောင်ချွတ်ထားခြင်းကြောင့် ဖြူဆွတ်၍ မှုန့်ညက်နေသော သကြားတွေဟာ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကို လုံးဝကောင်းကျိုးမပြုပါ။ ဒါ ကြောင့် အမှုန့်အပွင့်ကြီးပြီး ဝါကြင် ကြင်အရောင်ရှိတဲ့ သဘာဝသကြာ့း ကိုသာသုံးသင့်ပါတယ်။
အအေးမိ/တုပ်ကွေးရှိ သူက မိမိရှေ့တွင်နှာချေလာပါက မျက်နှာ ကိုတစ်ဖက်သို့ လွှဲထားလိုက်ပါ သို့မဟုတ် မျက်လုံးကိုပါ ပိတ် ထားပါ။ သင့်နှာခေါင်းသာမက မျက်လုံးကလည်းလေထဲရှိ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးများကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိလို့ပါဖြစ် ပါတယ်။
(၁၆) အကောင်းမြင်စိတ်ဓာတ် မွေးမြူပါ
ဒေါသထွက်ခြင်း၊ အဆိုးမြင် စိတ်ရှိခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း စတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတက် အကျကြောင့် ဃသမအငျသူ ဟိုမုန်း ထွက်ရှိလာပါတယ်။ ထိုအခါ ဟို မုန်းများညီညွတ်မျှတမှုကို ပျက်စီး စေပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအားကျဆင်း လာတာကြောင့် အအေးမိလွယ်ပါ တယ်။
ယူကလစ်ပင်ရဲ့ အဆီဟာ အအေးမိ/နှာစေး/ချောင်းဆိုးခြင်း အတွက် ပိုးသတ်ဆေးအဖြစ်အလွန် အသုံးတည့်တာကြောင့် ယူကလစ် ဆီကို ရှူဆေးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ယူကလစ်ပင်အရွက်နှင့် ကိုင်းတို့ကို ရေနွေးဖြောရေချိုး၍လည်းကောင်း အီတလီနိုင်ငံရိုးရာကုထုံး များတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါ တယ်။
လေးလိပ်သောက်ခြင်းက နှာ ခေါင်းနှင့်အဆုပ်အတွင်းရှိ ရောဂါ ကာကွယ်ပေးနိုင်သော အမြှေးပါး လေးများကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တုပ်ကွေးဖြစ် စေတဲ့ဗိုင်းရပ်(စ်)ပိုးတွေကို ရှူရှိုက် မိတဲ့အခါ ပျက်စီးပြီးဖြစ်နေတဲ့ ထို အမြှေးပါးလေးတွေက ကာကွယ် မပေးနိုင်တော့ပါဘူး။
စိုစွတ်နေတဲ့ဧရိယာမှာရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ မှိုပိုးမွှားတွေ ရှင်သန် ပေါက်ဖွား လွယ်ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်မိမိအိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို စိုစွတ်ထိုးမှိုင်းမှုမဖြစ်ရအောင်၊ လေဝင်လေထွက် ကောင်းအောင်၊ အလင်းရောင်ဝင်အောင်၊မှိုနံ့ပျောက် အောင် အထူးဂရုပြုပေးပါ။
အထက်ပါနည်းလမ်း (၁၉) သွယ်ကို လက်ကိုင်ထား၍ စိုစွတ် အေးမြတဲ့မိုးဥတုနှင့်ဆောင်းဥတု တွေမှာ မိမိနဲ့မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျန်းမာရေးအသိဖြင့် ကြိုတင်ကာ ကွယ်နိုင်ကြပါစေကြောင်း။
ပေါက်ပေါက် / ပြည်ထောင်စုနေ့ စဉ်
ကျွန်မ အသက်က 34 နှစ်ရှိပါပြီ။ လက်ကောက်ဝတ်နား နာနေတာ9လပိုင်း 2013 ကတည်းက ဆေးထိုး ဆေးစားခဲ့ပါတယ်။ တလပိုင်း မနက်အိပ်ယာထချိန် မှာ လက်ဆစ် လက်မောင်းတွေ ခြေဆစ်ခြေသလုံးတွေ တောင့်တင်းပြီး အဆစ်တွေနာနေတာ ပုံမှန်ဖြစ်ဖို့ တနာရီကြာတယ်။ ခြေချောင်းအောက်ဖဝါးက ထောက်လိုက်ရင် နာနေတာ ဆရာဝန်သွားပြတော့ leflunomide 1 OD6လသောက်ခိုင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မအဲဒီဆေးရဲ့s ide effect ကိုသိတော့ ဆက်မသောက်ရဲတော့ဘူး ရပ်လိုက်ပြီး celecoxib တို့ aceclofenac တွေသောက်တော့ သက်သာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု5လပိုင်း2ရက်နေ့မှာ ပြန်ဖြစ်လာတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်က ဂုတ်ရိုးနားပါ ပူပြီးနာလာတယ်။ ကျွန်မ OSA က normal RA က positive တဲ့၊ uric acid လည်း normal ESR စစ်တော့ 25mm/1hr တဲ့။ ဘာဆက်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ကူညီပေးပါဆရာရှင်။
၃၅ နှစ်၊ ကျား၊ အိမ်ထောင်သက် ၅ နှစ်၊ အရက်၊ ဘီယာ၊ ဆေးလိပ်၊ အသား၊ လုံးဝ မသောက် မစားသည်မှာ ၁ဝ နှစ်ရှိ။ အသက် ၁၉ နှစ်ခန့်မှာ ရောဂါစတင် ခံစားရ၊ ရောဂါလက္ခဏာများမှာ လက်ချောင်းဆစ်များ၊ လက်ကောက်ဝတ်များ၊ လက်မောင်းရင်းများ၊ ဒူးဆစ်များ၊ ခြေမျက်စေ့များ၊ ခြေဖနောင့်များတွင် ရောင်ရမ်းလာ၊ နီမြန်းလာ၊ ပူလာပြီး လှုပ်ရှားမရ၊ ထိလျင်လည်း နာကျင်၊ ကွေးထားလျင် ဖြောင့်ရန် ခက်ခဲ ဖြောင့်ထားလျင် ကွေးရန် ခက်ခဲ၊ ကြိုးစား၍ လှုပ်သော် အရမ်း နာကျင်၊ လက်ဆစ်များတွင် ဖြစ်ပါက မည်သည့် အရာကိုမျှ ကိုင်၍မရ။ တစ်ပြိုင်တည်း ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်၊ ဆစ်ဆစ်နေ၍ ကိုက်ခဲနေခြင်းမျိုး မဟုတ်၊ တစ်လ ၂ ခါမှ ၅ ခါခန့် အထိဖြစ်။
Etodolac/Lodine 500mg ကို ရောဂါ ခံစားရချိန်သောက် Acetaminophen, Aspirin, Ibuprofen ဆေးများက ကျွန်တော့် ရောဂါကို မသက်သာစေပါ။ ယခင် Paracetamol နှင့် Ibuprofen ရောထားသော ဆေးတစ်မျိုးသောက်၊ အိပ်နေချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာပါက နိုးလာသည့် အချိန်တွင် ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်း၍မရပါ၊ အသက် ၂၇ ခန့်မှ စတင်၍ ကုသမှု ခံယူ၊ ယခု အချိန်ထိ ရောဂါရှာမရ၊ ဆရာဝန် ၅ ယောက်ဖြင့်ပြပြီး၊ Gout မဟုတ်ဟုပြော၊ အဖြစ်များသော Arthritis မဟုတ်သော်လည်း Arthritis သည် အမျိုးပေါင်း များစွာရှိ၍ တစ်မျိုးမျိုးသာ ဖြစ်မည်ဟုပြော။ ပထမဆုံး ဆရာဝန်မှ Uric Acid မမြင့်သော်လည်း Uric Acid ချသည့် ထိုးဆေး တစ်နေ့ တစ်လုံး ၃ ရက် နှင့် Allopurinol (mg မမှတ်မိပါ) တစ်နေ့ ၂ လုံး ၃လစာ ပေးပြီး ၃ လ ပြည့် ဆီး၊သွေး ထပ်စစ်၊ Uric Acid တော့ကျ သွားပြီ OK မည်ထင်ပါသည်ဟု ပြောသော်လည်း မထူးခြားခဲ့ပါ။ အခြား ဆရာဝန် ၄ ယောက်မှ ဆီး၊ သွေး အကြိမ်များစွာ စစ်သော်လည်း ရာဂါ ရှာမရသလို Treatment လည်းမပေးပါ။ သို့သော် ဆရာဝန် တစ်ဦးမှ Vitamin D အရမ်း နည်းနေသည် ဆို၍ Vitamin D 50,000 IU တစ်ပတ် တစ်လုံးနှုံး ၁၂လုံး သောက်ပြီး သွေးပြန်စစ်၍ ဆက်မသောက်ရန် ပြောပါသည်။ နောက် ၆ လခန့်ကြာ ထပ်မံသွားတွေ့ပြီး ထူးခြားမှုမရှိ၍ နောက် ဆရာဝန်ထံ ညွှန်း။ ဆရာဝန် အားလုံးမှ Anti-Inflammatory သောက်ရန်သာညွှန်း၊ side effect တွေကြောင့် မသောက်ချင်ပါ။ သို့ပါ၍ ဆရာ့ထံမှ အကြံညဏ် တောင်းခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Lab Report မှာ အရမ်း များလွန်းနေ၍ ဆရာသိချင်သော Item ကို email ပြန်ကြားပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ ကျွန်တော်ရှာပြီး ပို့ပေးပါမည်။
လူ့အဆစ်တွေမှာ Osteoarthritis ဖြစ်ရင် ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ နာတာ၊ ပုံမှန်လှုတ်မရအောင် တင်းနေတာ နဲ့ ရောင်နေတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဆစ်နေရာမှာရှိတဲ့ အရိုးထိပ်ကို ဖုံးပေးထားတဲ့ အရိုးနု စားသွားလို့ဖြစ်ရတယ်။ ဖြစ်လာရင် အဆစ်က အရင်လို လှုတ်ရှားဘို့ ခက်လာမယ်။ နာမယ်။ နောက်ကျော၊ တင်ပါးဆုံ၊ ဒူးနဲ့ ခြေထောက်တွေမှာ ဖြစ်တယ်။ လည်ပင်း၊ လက်ချောင်း တွေမှာလဲ ဖြစ်တယ်။
အမေရိကန် ၃၃ သန်းမှာ ဖြစ်နေကြရတယ်။ Degenerative joint disease အိုလို့ဖြစ်တဲ့ အဆစ်နာလို့ ခေါ်ပေမဲ့ Osteoarthritis (OA)လို့ ခေါ်တာ ပိုသင့်တော်တယ်။ ငယ်တဲ့သူတွေမှာလဲ ဖြစ်ပေမဲ့ အိုမှဖြစ်တာ များတယ်။ အသက် ၆၅ ကျော်ရင် အများဆုံး။ Genes မျိုးဗီဇကနေလာရင် ငယ်ငယ်နဲ့ ဖြစ်မယ်။
ကျန်းမာရေး ရာဇဝင်၊ ခံစားရပုံ၊ ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ ပါတ်သက်တာတွေ စစ်ဆေးမယ်၊ သွေးစစ်မယ်၊ Joint aspiration အဆစ်ထဲက အရည် ထုတ်စစ်မယ်၊ X-ray ဓါတ်မှန်၊ Magnetic resonance imaging (MRI) ရိုက်မယ်။
သုတေသနတခု အဆိုအရ အသက်ရလာလို့ သုံးဖန်များလို့ ဖြစ်လာစေတဲ့ (ဆဲလ်) တွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှု Unfolded Protein Response (UPR) ကို အာရုံစိုက် လေ့လာတော့ အသက်ရသူတွေမှာ UPR ပျက်ယွင်းနေကြတယ်။ နောက် သုတေသန တခုက OA ဖြစ်သူတွေရဲ့ မျိုးဗီဇ-ခလုပ်တွေကို လေ့လာတယ်။ FAAH ဆိုတဲ့ မျိုးဗီဇဆိုတာ နာတာကို ခံနိုင်စွမ်းနဲ့ ပတ်သက်တယ်။ OA ဖြစ်သူတွေမှာ ပိုများနေတာ သိရတယ်။ နောက် သုတေသနတခုအဆိုအရ လက်ချောင်းတွေမှာ ဖြစ်ရင် ဒူးမှာဖြစ်တာထက် ပိုမြန်တာသိရတယ်။ Complement C5 ဆိုတဲ့ ပရိုတင်းနဲ့ ဆက်စပ်နိုင်တယ်လို့ ထင်တယ်။
၂ဝ၁ဝ ဧပြီလထဲမယ် ချီကာဂိုမှာ American College of Rheumatology’s (ACR) State-of-the-Art Symposium ဆိုတာကို ကျင်းပခဲ့တယ်။ ၂ဝ၁ဝ နိုဝင်္ဘာလထဲမှာလဲ အက်တလန်တာမြို့မှာ American College of Rheumatology (ACR) က နှစ်ပါတ်လည် အစည်းအဝေး လုပ်တယ်။ ACR မှာ တင်ပြခဲ့တာက OA ဆိုတာ Inflammatory disease ရောင်ရမ်းတာ ဖြစ်တယ်။ Rheumatoid arthritis လေးဘက်နာနဲ့ ဆင်တယ်။ Wear-and-tear disease သုံးဖန်များလို့ ဖြစ်တဲ့သဘော မဟုတ်ဘူးတဲ့။
Treatment အရိုး-အဆစ်နာရောဂါ ကုသခြင်း
Osteoarthritis ကို ဆေးပေးတယ်ဆိုတာ နာတာ သက်သာအောင်၊ အဆစ်တွေ တင်းတောင့် မနေအောင်သာ ဖြစ်တယ်။ Analgesics အနာ-အကိုက်သက်သာဆေးတွေ၊ နာတာကို သက်သာစေနိုင်ပေမဲ့ ရောင်တာကို မသက်သာစေပါ။
Acetaminophen ဆေးကို နဲနဲနဲ့ အတော်အသင့် နာတာအတွက် သုံးနိုင်တယ်လို့ American College of Rheumatology ကနေ ညွှန်းတယ်။ Tylenol, Anacin (Aspirin-free), Excedrin caplets and Panadol နာမည်တွေနဲ့ ရောင်းပါတယ်။ Acetaminophen ကို ၄-၆ နာရီတခါ 325 to 1,000 mg သောက်နိုင်တယ်။ တနေ့ထဲမှာ 4,000 mg ထက် မပိုရပါ။
Topical analgesics လိမ်းဆေးတွေ
Voltaren Gel လိမ်းဆေးဟာ စတီရွိုက်မပါတဲ့ (NSAID) Diclofenac ဖြစ်တယ်။ ဆိုင်မှာ အလွယ် ဝယ်ရမဲ့ ဆေးတွေလဲ ရှိတယ်။ Capsaicin ဆေးဟာ Cayenne peppers ကနေ ဖေါ်စပ်ထားတယ်။ ကြာကြာလိမ်းရင် လောင်နိုင်တယ်။ Zostrix, Zostrix HP, Capzasin-P နာမည်တွေနဲ့ ရောင်းတယ်။
ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ခေါင်းကိုက်နေတာကို ခြေမ နှိပ်တော့ အာရုံပြောင်းစေတာမျိုး အစွမ်းရှိတယ်။ Menthol, Oil of wintergreen, Camphor, Eucalyptus oil, Turpentine oil, Dihydrochloride and Methlnicotinate ဆေးတွေဟာ အဲဒါမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်။ Salicylates ဆေးက Counterirritants သဘောဖြစ်တယ်။ Aspercreme, Ben-Gay, Flexall, Mobisyl and Sportscreme နာမည်တွေနဲ့ ဝယ်လို့ရတယ်။
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) စတီရွိုက်မပါတဲ့ အနာသက်သာဆေးတွေ
Corticosteroid injections စတီရွိုက် ထိုးဆေး
နာနေတဲ့ အဆစ်ထဲကို ထိုးပေးရတယ်။ ဆေးမထိုးခင် အဆစ်ထဲက များနေတဲ့ အရည်တွေကိ်ု စုပ်ထုတ်နိုင်တယ်။ American College of Rheumatology (ACR) ကညွှန်းတာကတော့ Acetaminophen နဲ့ မသက်သာသူ၊ အသင့်အတင့်ကနေ သိပ်ဆိုးသူတွေကို ၁ နှစ်မှာ ၃-၄ ခါ ထိုးခိုင်းတယ်။
Hyaluronic acid therapy ဆေး၊ အဆစ်ထဲမှာ ရှိနေတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ Shock absorber သဘော၊ Lubricant သဘော လုပ်ပေးမယ်။ တပါတ်တခါ ၃-၅ ပါတ် ထိုးရတယ်။ အထဲကအရည်နဲနဲစုပ်ထုတ်ပြီးမှ ဆေးထိုးရတယ်။ NSAIDs နဲ့ COX-2 drugs တွေနဲ့ မသက်သာသူ၊ ဆေးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမခံနိုင်သူတွေကို ထိုးပေးနိုင်တယ်။ နဲနဲ နဲ့ အသင့်အတင့် ဆိုးသူတွေမှာ သက်သာတယ်။
Other procedures တခြားနည်းတွေ
ရောဂါအကြောင်း အသေအခြာလေ့လာပြီး ကိုယ့်ဖါသာ ပြုပြင်နေနိုင်တယ်။
(အေရိုးဘစ်) စတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နိုင်တယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် ချတာ ကောင်းတယ်။
လမ်းလျှောက် အကူပစ္စည်း သုံးတာ၊
ခြေထောက်မှာ အထူးပစ္စည်း သုံးတာ၊
(TENS) လျှပ်စစ်နည်း သုံးတာ၊
Physical therapist (ဖီဇီယို-သာရာပီ)၊
Chronic pain class နာတာရှည် နာနေသူတွေအတွက် သင်တန်းမျိုးတက်တာတွေလဲ လုပ်နိုင်တယ်။
New Osteoarthritis Treatments ကုသနည်းသစ်တွေ
Vitamin D ဗီတာမင် ဒီ ဟာ မျက်လှည့်ပြသလိုမျိုး အကျိုးရှိတဲ့သူတွေမှာ ရှိတယ်။ နာတာကိုရော အင်္ဂါပျက်စီးမှုမှာပါ သက်သာစေတယ်။ ဒါပေမဲ့ National Institutes of Health (NIH) အထောက်အပံ့နဲ့လုပ်တဲ့ ၂ နှစ်တာ သုတေသန အဆိုအရ Vitamin D ကနေ ဒီရောဂါမှာ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ သက်သေမပြနိုင်တာ တွေ့လာရတယ်။
Naproxen sodium နဲ့ Esomeprazole magnesium (Vimovo) ဆေးကို တွဲပေးပြီးစမ်းတဲ့အခါ Celecoxib (Celebrex) ဆေးလိုဘဲ နာတာသက်သာစေတဲ့အပြင် Heartburn ရင်ပူတာကို သက်သာတာ တွေ့ရတယ်။
New Osteoarthritis Medicines အလားအလာရှိတဲ့ ဆေးတွေ
Tanezumab ဆေးဟာ သုတေသန အဆင့် ၂-၃ မှာ အလားအလာ ကောင်းနေတယ်။
Stem-cell therapy ကင်ဆာအတွက် အဓိကသုတေသနလုပ်နေတဲ့ (စတင်မ်-ဆဲလ်) နည်းကလဲ အလားအလာ ရှိနိုင်တယ်။
၁၃-၁-၂ဝ၁၁ နေ့မှာ Food and Drug Administration ကနေ အဆစ်နာမှန်သမျှအများဆုံးသုံးနေတဲ့ Acetaminophen ကို ကန့်သတ်မှု ပိုလုပ်လိုက်တယ်။ Acetaminophen ဆေးဟာ များများပေးရင် အသဲကို ထိခိုက်စေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆေးတပြားမှာ 325 milligrams ထက်မပိုဘို့ သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ မူးယစ်အုပ်စုဝင်ဆေးနဲ့ တွဲရောင်းတာရှိတယ်။ ဥပမာ Vicodin နဲ့ Oxycodone (Percocet) ဆေးတွေ။